Alpha GPC budada (28319-77-9) hplc = 98% | AASraw R & D Reagents
/ Products / Nootropics budada / Alpha GPC budada
SKU: 28319-77-9. Category: Nootropics budada
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa amar guud oo ah budada Alpha GPC (28319-77-9), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Alpha GPC budada, oo sidoo kale loo yaqaano L-Alpha glycerylphosphorylcholine ama choline alfoscerate, waa aotropic dabiiciga ah oo ka shaqeeya labadaba isaga iyo iyada oo la jaanqaadaysa nootropics kale. Waxaa dabiici ahaan ku jiraa jidhka qadar yar oo ganacsi ahaan loo soo saaray sida soo saarida sot lecithin ....
Alpha GPC daawada budada ah
Alpha GPC Calaamadaha asaasiga ah
Name: Alpha GPC budada
Formula kelli: C8H20NO6P
Miisaankani waa: 257.22
Dhibcaha Biyaha: 142.5-143 °
Alpha GPC budada ah oo kor u qaadaya hawlaha maskaxda iyo kor u qaad dheeraad ah
Budada cagaarka ah ee Raw Alpha, L-Alpha glycerylphosphorylcholine, choline alfoscerate
Root Alpha GPC
Dhexdhexaad ah ee dheef-shiid kiimikaadka fosfolipid, Root Alpha GPC waxay si dhaqso ah u shaqeeyaa oo si qumman u shaqeyneysaa, ugu horrayn adoo keenaya qalab muhiim ah maskaxda.
Daawada Alpha GPC waxay leedahay waxyaabo aan hagaagsaneyn, oo ay ku jiraan xoojinta xusuusta iyo ilaalinta gabowga maskaxda. Dhibaatooyinka qaaska ah ee ku lug leh kumanaan ka mid ah kaqeybgalayaashu waxay muujiyeen inay tahay daaweyn wax ku ool ah oo la xiriirta xusuusta da'da la xiriirta cudurro kala duwan, oo ay ku jiraan cudurka Alzheimer, xanuunka 'vascular dementia', iyo stroke. Waxa kale oo uu leeyahay neerafrotective habdhaqanka gabowga iyo daraasadaha waxay soo jeedinayaan inay sidoo kale noqon karto mid wax ku ool ah ee daaweynta welwelka.
Waxay leedahay waxtarrada aan laheyn, sidoo kale, oo ay ku jirto awoodda lagu wanaajinayo caafimaadka xuubka unugyada iyo kor u qaadista degdegga ah ee dib u soo kabashada jirka ka dib. Daraasadaha hordhaca ah waxay soo jeedinayaan in ay sidoo kale u shaqeyn karto dopaminergic, kor u qaadista dopamine hormoonka, taas oo macnaheedu tahay in ay u adeegi karto daweyn suurtagal ah oo ku saabsan xaaladaha neurodegenerative sida cudurka Parkinson iyo sidoo kale wuxuu noqon karaa xoojiyaha niyadda.
Hase yeeshe dad badan oo isticmaala buotropic, xoogga dhabta ah ee budada Alpha GPC ayaa ku jira alaabooyinka xooggan marka la isku daro waxyaabo kale oo dheeri ah. Kobcin dheeriga ah ee budada loo yaqaan 'Raw Alpha GPC' ayaa ka dhigaysa mid si weyn u kordhiya saameynta garashada ee cunsuriyada. Waxay sidoo kale ka hortagi kartaa yar yari, laakiin madax-xanuunka niyadjabsan waa mid ka mid ah waxyeelooyinka yar-yar ee la xidhiidha cunsuriyada nootropics.
Budada Alpha GPC waxaa lagu xakameynayaa Yurub, halkaas oo loogu talagalay daaweynta cudurka Alzheimers oo lagu iibiyo hoosta magaca Gliatilin iyo Delecit. Waddanka Maraykanka waxaa loo tixgeliyaa nafaqada cuntada, waxaana la heli karaa iyadoon warqad dhakhtar qorin.
Qiyaasta caadiga ah ee alfa-GPC waa 300-600 mg, sida ku cad qiyaasaha ugu caansan. Qiyaastan waxay ku saleysan tahay daraasadda iyadoo la adeegsanayo alpha-GPC si kor loogu qaado wax soo saarka koritaanka (600 mg) iyo labadii daraasadood oo muujinaya kororka hoormoonka koritaanka hormoonka kor u kaca, waxaana suurtagal ah inuu qaato qiyaas wanaagsan oo loogu talagalay ciyaartoyda.
Isticmaalka alfa-GPC ee calaamadaha muujinaya hoos u dhaca fahamka, inta badan daraasadaha oo idil waxay isticmaalaan qiyaasta mgamiin XMUMX maalin kasta, oo loo qaybiyay seddex qiyaasood oo ah 1,200 mg. Ma hubo sida qiyaasta daawada hoose ee faa'iido u lahaan karto, laakiin xajmiga 400 ayaa u muuqda in si joogta ah loola xiriiriyo lacagta.
Daraasaduhu waxay soo jeedinayaan in saameynta alfa-GPC ee qulqulka afka laga qaato ay ugu sarreyso 300-600 mg / kg, taas oo ah qiyaasta aadanaha ee 48-96 mg / kg (oo loogu talagalay dadka 150lb, maalin kasta 3,272-6,545 mg).
Digniin ku saabsan budada Alpha GPC
Inkasta oo ay tahay ilo dabiiciga ah ee qoyaanka nafaqo leh, kaabidda qaabka isku dhafan waxay sababi kartaa saameynta daawada Alpha GPC. Mid ka mid ah saamiga daawada Alpha GPC ee caadiga ah waa madax xanuun ama madax-wareer, oo badanaa ka yimaada soo-saarka badan ee maskaxda. Dadka qaarkiis, sida caan ah "biohacker" Dave Asprey, xusuusnow inay aad u sarreeyaan kolesteroolka, sidaas darteedna madax xanuun ku dhaco marka aad daaweynayso.
Waxyeellooyinka kale ee ka yimaada budada cagaaran ee loo yaqaan 'Raw Alpha GPC' waxaa ka mid ah waxyaabaha sida jahawareerka, erythema, iyo hurdo la'aan (laga bilaabo kicinta). Si kastaba ha noqotee, inkastoo ay suurtogal tahay saameynta daawooyinka, waxaa jira caddayn ah in nootropic this si fiican u dulqaadanayo qiyaasta sare. LD50 (qiyaasta loo isticmaalo in lagu arko qiyaasta daawada 50% ee dadweynaha) waxay muujinaysaa qiyaasta 10k mg / kg (u dhiganta shamac 6800 loogu talagalay qofka 150 lb) ee jiirka.
Daraasad aad u macquul ah ayaa muujisay "heer aan wax laga ogaan karin" oo qiyaasta u dhiganta mgmarka 1636 ee qof 150 lb.
Inkasta oo caadiyan loo yaqaano in aan aheyn mid aan habooneyn, qaar ka mid ah dadku waxay soo sheegaan kobcinta garasho ee leh alfa-GPC dheeraad ah.
Waxay noqon kartaa mid caqli gal ah in la qaato alpha-GPC oo ay la socoto asiidh dufan ah oo lagu nuugayo (sababtoo ah inay tahay fosfolipid), inkastoo aysan taasi u muuqanin shuruud buuxda.
L-alpha-glycerylphosphorylcholine (oo gaaban Alpha-GPC sida caadiga ah, sidoo kale loo yaqaanno cholin alphoscerate ama glycerophosphocholine) waa qalliin oo ay ku jiraan fosfolipid iyo dhexdhexaad ah dheef-shiid kiimikaad (lecithin metabolism) ama kaliya molecule molecule oo leh labo asiidh oo dufan ah. , waxaana la yiraahdaa in ay noqoto horey loogu talagalay acetylcholine iyo fosfatidylcholine ee jirka ka dib marka la cuno.
Alpha-GPC waxaa loo arkaa inay tahay mid ka mid ah qaybaha badeecadaha cas ee maqaarka iyo unugyada xubnaha jirka laakiin inta badan waa qadar qiyaasta qadarka ah ee ilaha dabiiciga ah ee soo noqnoqda. Kala duwanaanta Alpha-GPC waxaa lagu sameeyaa si caan ah, halkaas oo si fudud loogu abuuri karo ukunta ama soy lecithin. Marka loo eego tilmaantan iyo ilaha, waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa sida walxaha xasaasiga ah ee lecithin.
Alpha GPC wuxuu si dhaqso ah u kordhin karaa soo dejinta acetylcholine iyo neurotransmission ee maskaxda, taas oo ah caadi ahaan 20-30 daqiiqado ka dib isticmaalka afka. Isticmaalayaasha waxay filan karaan inay korodhsadaan feejignaan maskaxeed, feejignaan iyo diiradda maskaxda muddadan. Isticmaalka si joogta ah ee la xidhiidha nidaam caafimaad oo macquul ah iyo nidaam jimicsi ayaa la kulmi doona waxqabadka buuxa iyo saameynta garashada ee Root Alpha GPC budada ku jirta todobaadka toddobaad ee ugu horreeya isticmaalka.
Alpha GPC Pow Powder
Alpha GPC Purchase Marketing
Sida loo iibsado budada Alpha GPC laga soo qaado AASraw
Alpha GPC Roodhafka Cagaarka ah